Ndị mmadụ masịrị m. Nye ha a kediegwu ahịa ozi na a ego na ha ga na-apụ ... ma-enye ha ohere iji merie baajị na ha profaịlụ na peeji nke na ha ga-alụ ọgụ maka ya. Ana m eme onwe m ọchị ka m na-echegbu onwe m mgbe m gachara adịkwa a mayorship na Foursquare - ọ bụ ihe nzuzu. Nke ahụ bụ naanị ihe gamification na-adabere.
Bọọlụ bụ otu n'ime ndị egwuregwu na-ere ahịa nke na-enyere ndị ahịa ahịa aka itinye usoro ịme egwuregwu na saịtị ha na ngwa ha. Ha ekesawo akwụkwọ akụkọ ọhụrụ, Mmeri na Gamification: Atụmatụ sitere na Ọkachamara Playbook. Ọ dị ezigbo ọgụgụ. Ndị a bụ ụfọdụ isi ihe gbasara ịmepe usoro ịme egwuregwu nke gị:
Bunchball bụ onye na-eweta njikwa ngwa ngwa ụlọ ọrụ, ejiri mee ka ikere òkè dị elu bara uru, itinye aka, iguzosi ike n'ihe na ego. Ngwakọta egwuregwu nke Bunchball bụ ọrụ igwe ojii nwere ike ịbawanye ma nwee ntụkwasị obi maka ịntanetị na ebe nrụọrụ weebụ, mmekọrịta mmadụ na ibe ya, na ngwa mkpanaka. Bunchball achọpụtawo ihe karịrị ijeri omume 20 nke na-eduga na iguzosi ike n'ihe nke ndị ahịa na itinye aka n'ọrụ maka ndị ahịa ha.